Akukho ndawo njengeKhaya kwiLFK! - I-Airbnb
Akukho ndawo njengeKhaya kwiLFK!
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguKim
Lo ngumgangatho we-2 otofotofo wegumbi lokulala eli-2 kwindawo yabucala kwindawo ene-plex. Zonke iinkcukacha ziyilwe ngentuthuzelo yakho engqondweni kubandakanya ibhedi yobukhulu bokumkani kwigumbi lokulala elikhulu.
Iyunithi, ebekwe ngokulula kumbindi weLawrence, Ks nje ngaphandle kwesitrato sama-23 ikwaqhayisa ngekhitshi evulekileyo / indawo yokuhlala enedesika yabucala.
Iindwendwe zinokufikelela kwindawo epheleleyo yabucala kubandakanya amagumbi amabini okulala, ikhitshi, igumbi lokuhlambela eligcweleyo kunye nendawo yokuhlala. Ikhitshi inezitya kunye nezinto zokupheka kwaye ibandakanya imicrowave, itoaster kunye nekofu.
Kukho isixhobo sokomisa iinwele esibonelelweyo kunye nentsimbi kunye nebhodi yoku-ayina ukuze kube lula kuwe.
Umnyango oqhelekileyo wesakhiwo unekhowudi yokungena ekhuselekileyo yoxolo lwengqondo olongezelelweyo.
Iibhedi, iibhedi kunye neelinen zikhethwe ngokuthuthuzela kwakho engqondweni.
Kukho nje iphakheji yentambo kamabonwakude esisiseko ebonelelweyo. Unokufikelela kwi-Hulu yakho, i-Net-flicks, njl njl usebenzisa i-Wifi enikiweyo kwisixhobo sakho(s).
4.68 out of 5 stars from 90 reviews
4.68 · Izimvo eziyi-90
Esi sithuba somgangatho we-2 sikwindawo ene-plex ebekwe ngaphandle nje kwesitalato sama-23 kumbindi weLawrence, KS ngokukhawuleza, ukufikelela lula kwiindawo zokutyela kunye nokuthenga.
Ngelixa uya kufumana imiyalelo ye-elektroniki kunye neekhowudi zokuzihlola ngokwakho, ndifumaneka ngomyalezo okanye ngokubhaliweyo ukuba kufuneka.